काठमाडौँ । दिसालाई तुरुन्त मलमा रुपान्तरण गर्न सक्ने चर्पीको निर्माण भएको छ । अघिल्लो मंगलबार चीनको बेइजिङ पुगेर बिल गेट्स त्यसको उद्घाटन गरेका हुन् । माइक्रोसफ्ट क्रपका मालिक बिल गेट्सको
चिया तात्तातै पिउनुपर्छ भन्ने आम धारणा छ । जाडोमा त झन् चुरोटसँग तातो चियाको चुस्की लिनेहरुको संख्या अधिक हुन्छ । तर, अब चुरोट र रक्सी खानेहरुले तातो चिया पिउने बानी
के तपाईं रातभरि मोबाइल चलाउनुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस यस्तोसम्म हुनसक्छ
रातभरि मोबाइल फोनमा गेम खेल्दा एक जनाको एउटा आँखाको दृष्टि गुमेको छ । चिनका एक व्यक्ति उनले रातभरि मोबाइल फोनमा गेम खेल्ने बानी पारेपछि एउटा आँखाको दृष्टि गुमेको अस्पतालले जनाएको
विवाहित महिलाहरूले आफू विवाहित भएको पहिचान गराउनका लागि सिन्दूरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सिन्दूरलाई विवाहित महिलाहरूको मुख्य श्रृंगारको रूपमा लिने गरिन्छ । तर, त्यस्ता सिन्दूर स्वास्थ्यका हिसावले भने हानिकारक हुने
कारागारमा गाँजा ल्याएको १८ वर्षपछि उनकै नाकबाट निकालियो
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा एक व्यक्तिले कारागारमा गाँजा ल्याएको १८ वर्षपछि उनकै नाकबाट निकालिएको छ । गार्डहरूले पत्ता नलगाऊन् भनी उनले दाहिनेतर्फको नाकको प्वालमा गाँजा लुकाएका थिए तर पछि निकाल्न
हरेक मानिसको शरीरिक बनावट फरक हुन्छ । फरक–फरक बनावट र संकेतले व्यक्तिको विशेषताबारे पनि बताइरहेको हुन्छ । विशेष गरी समुद्रशास्त्रले यस्ता कुराको विशेषता बताइरहेको हुन्छ । शास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका
क्यानबेरा । हरेक वर्ष गम्भीर प्रकृतिको मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएका करिब दश लाख अष्ट्रेलियालीले उपचार नै नगराउने गरेका एक पछिल्लो अनुसन्धानमा देखिएको छ । यी मानसिक स्वास्थ्यका विरामीहरु उपचार नगराइ
प्रदर्शनी स्थलबाटै भयो १८ लाख डलरको हीरा चोरी
जापान । जापानी प्रहरीले शुक्रबार १८ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको चोरी भएको हीराको खोजीलाई तिब्र बनाएको छ । यो हीरा राजधानी टोकियो बाहिर आयोजित गरगहना व्यापार प्रदर्शनीका क्रममा हराएको थियो
एजेन्सी, दिन प्रतिदिन नयाँ प्रविधिको विकाससँगै बच्चाहरूले धेरै समयसम्म टिभी, कम्प्युटर तथा फोनमा बिताउने गरेको देखिन्छ । बच्चाहरूले लगातार टिभी हेर्न, कम्प्युटर, ट्याब्लेट, तथा स्मार्टफोन गेम खेल्न, भिडियो हेर्नका लागि
मादक पदार्थ नियमित सेवन गर्नेभन्दा कहिलेकाहीँ पिउनेलाई बढी असर
वासिङ्टन डिसी । के तपाई नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ रु कि कहिले कहिले मात्रै गर्नुहुन्छ रु यदि तपाईको उत्तर कहिलेकाहीँ पिउँछु र पिएको बेलामा धेरै पिउँछु भन्ने आयो भने
मःम अत्यान्तै प्रख्यात खाजाको रुपमा लिइन्छ । नेपाली बजारमा त यो झन छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ । रेष्टुरेण्टमा गएर खाजा अर्डर गर्न जति मेनु हेरेपनि नेपालीले अन्तिममा मःम नै माग्छन् । हुनपनि
बाजागाजासहित गधाको बिहे भएपछि
आफ्नो परम्परा अनुसार मानिसले बिहे गर्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ । तर ब्याण्ड बाजा बजाएर गधाको बिहे भएको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? । सुन्दै अचम्म लाग्ने यो घटना हाम्र
पूर्व प्रेमीलाई सम्झेर रुँदा तौल घट्छ
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने गर्दछन् । भावनात्मक रुवाईले तौल घटाउन सहयोग गर्छ भन्दा तपाईहरुलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । कहिलेकाँही मानिसहरु विभिन्न बाभाँ, पीडा भोग्दा
विश्व चर्चीत हाँस्य कलाकार चार्ली च्याप्लिनको जीवन अनौठो कथाले भरिएको छ । हाँस्य क्षेत्रका बादशाह चार्लीको जीवनी बारे अहिले उनकै नाती कारमेनले डक्यूमेन्ट्री पनि बनाईरहेका छन् । ‘चार्ली च्याप्लिन, ए
डा. डीआर उपाध्याय संविधान जारी भएको अवसरमा असोज ३ गते विविध कार्यक्रम गरेर देशभर संविधान दिवस मनाइयो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। यो हामी सबै
गोरु, भेडा, भैसी आदि जनावरकोे सिङ पलाएको त हामीले देखेका नै हुन्छौँ । यस्तै विभिन्न लोक कथाहरुमा मान्छेको सिङ पलाएको पनि हामीले सुनेका छौँ । तर कथामा नभएर साँच्चिकै मान्छेको
पब्जी खेल्न नदिएको रिसमा एक युवकले गरे आफ्नै बुबाको हत्या
पब्जी खेल्न नदिएपछि एक युवकले आफ्नै बुबाको हत्या गरका छन् । यो अपत्यारीलो घटन भारतमा घटेको हो । भारतको कर्नाटक राज्यको बेलगावी जिल्लामा बसोबास गर्दै आइरहेका एक २१ वर्षीय युवकले
न्युज अफ नेपाल, भारत । पत्ताउन नसकिने जस्तो लाग्छ । यो सत्य घटना हो । भारतको तेलंगना राज्यमा दुई बाख्रालई प्रहरी हिरासतमा लिएको छ । बाख्राहरुले अस्पताल रिसरको भर्खर रोपिएका
मानिसका दुई गल्तीहरु केके हुन् ?
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । चाणक्य नीतिको १२ औँ अध्यायको १६ औँ श्लोकमा मानिसका दुई गल्तीहरुको बारेमा बताइएको छ । जुन गल्ती गर्दा कुनै पनि मानिसको जीवन पुर्ण रुपले पतन